1 Eze Devid emewo agadi,+ ọ ga-amiwokwa n’afọ ndụ; a na-ekpuchikwa ya ákwà, ma ahụ́ adịghị ekporo ya ọkụ.
2 Ya mere, ndị na-ejere ya ozi sịrị ya: “Ka a chọọrọ onyenwe m bụ́ eze otu nwa agbọghọ nke na-amaghị nwoke,+ ọ ga na-ejere eze ozi,+ ka o wee bụrụ onye na-elekọta ya;+ ọ ga na-edinakwa n’obi gị,+ ahụ́ ga na-ekpokwa onyenwe m bụ́ eze ọkụ.”+
3 Ha wee chọwa nwa agbọghọ mara mma n’ókèala Izrel dum, n’ikpeazụ, ha hụrụ Abishag+ bụ́ nwaanyị Shunem+ wee kpọbatara ya eze.
4 Nwa agbọghọ ahụ mara mma nke ukwuu;+ o wee bụrụ onye na-elekọta eze ma na-ejere ya ozi, ya na eze enweghịkwa mmekọahụ ọ bụla.
5 Ka ihe a niile na-eme, Adọnaịja+ nwa Hagit+ nọ na-ebuli onwe ya elu,+ na-asị: “Ọ bụ m gaje ịchị dị ka eze!”+ O wee mee ka a kwadebere ya ụgbọ ịnyịnya nke nwere ndị na-agba ha ịnyịnya, ndị ikom iri ise na-agbakwa ọsọ n’ihu ya.+
6 Ọ dịghịkwa mgbe nna ya kwuru ihe ga-ewute ya site n’ịsị: “Gịnị mere i ji mee otú a?”+ Ọ mara mma nke ukwuu n’ọdịdị ya,+ nne ya mụrụ ya mgbe a mụsịrị Absalọm.
7 Ya na Joab nwa Zeruya na Abayata+ onye nchụàjà wee na-emekọ ihe, ha wee malite inyere ya aka dị ka ndị na-eso Adọnaịja.+
8 Ma Zedọk+ onye nchụàjà na Benaya+ nwa Jehoyada na Netan+ onye amụma na Shimiaị+ na Riaị na ndị dike+ Devid esonyereghị+ Adọnaịja.
9 E mesịa, Adọnaịja chụrụ atụrụ na ehi na anụ ndị mara abụba n’àjà+ n’ebe dị nso na nkume Zohelet, nke dị n’akụkụ En-rogel,+ o wee kpọọ ụmụnne ya niile bụ́ ụmụ ndị ikom+ eze na ndị ikom niile nke Juda bụ́ ndị na-ejere eze ozi;
10 ma ọ kpọghị Netan onye amụma na Benaya na ndị dike na Sọlọmọn nwanne ya.
11 Netan+ wee gwa Bat-shiba,+ nne Sọlọmọn,+ sị: “Ọ̀ bụ na ị nụbeghị na Adọnaịja nwa Hagit+ aghọwo eze, ma onyenwe anyị bụ́ Devid amaghị banyere ya ma ọlị?
12 N’ihi ya, biko, bịa ka m nye gị ezigbo ndụmọdụ.+ Meekwara mkpụrụ obi gị na mkpụrụ obi nwa gị bụ́ Sọlọmọn ụzọ mgbapụ.+
13 Gakwuru Eze Devid, sị ya, ‘Onyenwe m bụ́ eze, ọ́ bụghị gị ṅụụrụ ohu gị nwaanyị iyi, sị: “Ọ bụ nwa gị Sọlọmọn ga-abụ eze mgbe m nwụrụ, ọ bụkwa ya ga-anọkwasị n’ocheeze m”?+ Oleekwanụ ihe mere Adọnaịja ji ghọọ eze?’
14 Lee! Mgbe ị ka ga na-agwa eze okwu n’ebe ahụ, mụ onwe m ga-esochi gị bata, m ga-akwadokwa ihe i kwuru.”+
15 Ya mere, Bat-shiba gakwuuru eze n’ọnụ ụlọ dị n’ime,+ eze emewokwa agadi nke ukwuu,+ Abishag+ bụ́ nwaanyị Shunem nọkwa na-ejere eze ozi.
16 Bat-shiba wee hulata kpọọrọ eze isiala,+ eze wee sị ya: “Gịnị ka ị chọrọ ịrịọ?”+
17 O wee sị ya: “Onyenwe m,+ ọ bụ gị ji Jehova bụ́ Chineke gị ṅụọrọ ohu gị nwaanyị iyi, sị, ‘Ọ bụ nwa gị Sọlọmọn ga-abụ eze mgbe m nwụrụ, ọ bụkwa ya ga-anọkwasị n’ocheeze m.’+
18 Ma, lee! Adọnaịja+ aghọwo eze, ma onyenwe m bụ́ eze amaghị banyere ya ma ọlị.+
19 O wee jiri ọtụtụ oké ehi na anụ ndị mara abụba na atụrụ chụọ àjà, kpọọkwa ụmụ ndị ikom eze niile+ na Abayata+ onye nchụàjà na Joab+ onyeisi ndị agha; ma ọ kpọghị ohu gị bụ́ Sọlọmọn.+
20 Ma gị onyenwe m eze—ụmụ Izrel niile na-ele gị anya+ ka ị gwa ha onye ga-anọkwasị n’ocheeze onyenwe m bụ́ eze mgbe ọ nwụrụ.+
21 Ọ ga-erukwa na ozugbo onyenwe m bụ́ eze sooro nna nna ya hà dinaa,+ mụ onwe m na nwa m Sọlọmọn ga-aghọ ndị mere ihe ọjọọ.”
22 Ma, lee! mgbe ọ ka na-agwa eze okwu, Netan onye amụma batara.+
23 Ha gwara eze ozugbo, sị: “Netan onye amụma abịala!” E mesịa, ọ batara n’ihu eze ma kpudo ihu n’ala kpọọrọ eze isiala.+
24 Mgbe ahụ, Netan sịrị: “Onyenwe m bụ́ eze, ọ̀ bụ gị kwuru, sị, ‘Ọ bụ Adọnaịja ga-abụ eze mgbe m nwụrụ, ọ bụkwa ya ga-anọkwasị n’ocheeze m’?+
25 N’ihi na taa, ọ gbadawo ka ọ gaa jiri ọtụtụ ehi na anụ ndị mara abụba na atụrụ chụọ àjà,+ ka o wee kpọọkwa ụmụ ndị ikom eze dum na ndị isi ndị agha na Abayata onye nchụàjà;+ ha na-erikwa ihe ma na-aṅụ ihe ọṅụṅụ n’ebe ahụ n’ihu ya, ha na-asịkwa, ‘Eze Adọnaịja, ị ga-adị ndụ!’+
26 Ma ọ kpọghị+ mụ onwe m bụ́ ohu gị, mụ na Zedọk+ onye nchụàjà na Benaya+ nwa Jehoyada na ohu gị Sọlọmọn.
27 Ọ bụrụ na ihe a e mere si n’aka onyenwe m bụ́ eze, mara na i mebeghị ka ohu gị mara+ onye ga-anọkwasị n’ocheeze onyenwe m bụ́ eze mgbe ọ nwụrụ.”
28 Eze Devid wee zaa, sị: “Kpọọrọnụ m Bat-shiba.”+ O wee bata n’ihu eze ma guzoro n’ihu eze.
29 Eze wee ṅụọ iyi,+ sị: “Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ,+ bụ́ onye napụtara+ mkpụrụ obi+ m n’ahụhụ niile,+
30 dị nnọọ ka m ji Jehova bụ́ Chineke Izrel ṅụọrọ gị iyi, sị, ‘Ọ bụ Sọlọmọn nwa gị ga-abụ eze mgbe m nwụrụ, ọ bụkwa ya ga-anọchi m n’ocheeze m!’ ọ bụ otú ahụ ka m ga-eme taa.”+
31 Bat-shiba wee hulata kpọọrọ eze isiala,+ sị: “Onyenwe m bụ́ Eze Devid, ị ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi!”+
32 Ozugbo ahụ, Eze Devid sịrị: “Kpọọrọnụ m Zedọk+ onye nchụàjà na Netan onye amụma na Benaya+ nwa Jehoyada.” Ha wee bata n’ihu eze.
33 Eze wee sị ha: “Kpọrọnụ ndị na-ejere onyenwe unu ozi,+ meekwanụ ka Sọlọmọn nwa m nọkwasị n’elu nne ịnyịnya nke m,+ durukwanụ ya gbadaa Gaịhọn.+
34 Zedọk onye nchụàjà na Netan onye amụma ga-etekwa ya mmanụ+ n’ebe ahụ ka ọ bụrụ eze Izrel; fụọkwanụ opi+ ma sị, ‘Eze Sọlọmọn ga-adị ndụ!’+
35 Sorokwanụ ya gbagote, ọ ga-abatakwa wee nọkwasị n’ocheeze m; ọ bụ ya ga-abụ eze n’ọnọdụ m, ọ bụkwa ya ka m ga-ahọpụta ịbụ onye ndú Izrel na Juda.”
36 Ozugbo ahụ, Benaya nwa Jehoyada zara eze, sị: “Amen!+ Ka Jehova bụ́ Chineke nke onyenwe m bụ́ eze kwuo otú a.+
37 Dị nnọọ ka Jehova si nọnyere onyenwe m bụ́ eze,+ ka o sikwa otú ahụ nọnyere Sọlọmọn,+ ka o meekwa ka ocheeze ya dị ukwuu karịa+ ocheeze onyenwe m bụ́ Eze Devid.”
38 Zedọk+ onye nchụàjà na Netan+ onye amụma na Benaya+ nwa Jehoyada na ndị Keretaịt+ na ndị Peletaịt+ wee gbadaa, mee ka Sọlọmọn nọkwasị n’elu nne ịnyịnya nke Eze Devid,+ durutekwa ya Gaịhọn.+
39 Zedọk onye nchụàjà wee wepụta mpi mmanụ+ n’ụlọikwuu+ ma tee Sọlọmọn mmanụ;+ ha wee malite ịfụ opi, mmadụ niile wee na-eti mkpu, sị: “Eze Sọlọmọn ga-adị ndụ!”+
40 E mesịa, ndị ahụ niile gbagotere wee na-eso ya n’azụ, ha na-egbu ọjà,+ na-aṅụrịkwa oké ọṅụ,+ nke mere na ala+ gbabiri abụọ n’ihi mkpọtụ ha na-eme.
41 Adọnaịja na ndị niile a kpọrọ òkù, bụ́ ndị ya na ha nọ, wee nụ ya mgbe ha risịrị nri.+ Mgbe Joab nụrụ ụda opi ahụ, ọ sịrị ozugbo: “Gịnị ka mkpọtụ a dị n’obodo a nke oké ụzụ+ na-ada n’ime ya pụtara?”
42 Mgbe ọ ka kpụ okwu n’ọnụ, lee, Jọnatan+ nwa Abayata onye nchụàjà bịara. Adọnaịja wee sị: “Batawa, n’ihi na ị bụ dike, i ji ozi ọma bịa.”+
43 Ma Jọnatan zara Adọnaịja, sị: “Ee e! Onyenwe anyị bụ́ Eze Devid emewo Sọlọmọn eze.+
44 Eze wee zipụ ya na Zedọk onye nchụàjà na Netan onye amụma na Benaya nwa Jehoyada na ndị Keretaịt na ndị Peletaịt, ha wee mee ka ọ nọkwasị n’elu nne ịnyịnya eze.+
45 Zedọk onye nchụàjà na Netan onye amụma wee tee ya mmanụ na Gaịhọn ka ọ bụrụ eze;+ e mesịa, ha si n’ebe ahụ gbagote na-aṅụrị ọṅụ, oké ụzụ na-adakwa n’obodo a. Ọ bụ ya bụ mkpọtụ ahụ unu nụrụ.+
46 Ọ bụghị naanị nke ahụ, Sọlọmọn anọkwasịwo n’ocheeze.+
47 Ihe ọzọkwa bụ na ndị na-ejere eze ozi abatawo ịgọzi onyenwe anyị, bụ́ Eze Devid, sị: ‘Ka Chineke gị mee ka aha Sọlọmọn dị ebube karịa aha gị, ka o meekwa ka ocheeze ya dị ukwuu karịa ocheeze gị!’+ Eze wee kpọọ isiala n’elu ihe ndina.+
48 Nke a bụkwa ihe eze kwuru, ‘Ka Jehova bụ́ Chineke Izrel bụrụ onye a gọziri agọzi,+ bụ́ onye mere ka e nwee onye ga-anọkwasị n’ocheeze m taa, m wee jiri anya m hụ ya!’”+
49 Ndị niile ahụ a kpọrọ òkù, bụ́ ndị ha na Adọnaịja nọ, wee malite ịma jijiji, onye nke ọ bụla wee bilie lawa.+
50 Egwu tụrụ Adọnaịja n’onwe ya n’ihi Sọlọmọn. Ya mere, o biliri gaa jigide mpi ebe ịchụàjà aka.+
51 Ka oge na-aga, a kọọrọ Sọlọmọn, si: “Lee, egwu ejidewo Adọnaịja n’ihi Eze Sọlọmọn; o jigidewokwa mpi ebe ịchụàjà aka, sị: ‘Ka Eze Sọlọmọn buru ụzọ ṅụọrọ m iyi na ya agaghị ewere mma agha gbuo ohu ya.’”
52 Sọlọmọn wee sị: “Ọ bụrụ na ọ ga-eme ka dike, otu ntutu isi+ ya agaghị ada n’ala; ma ọ bụrụ na a hụ ihe ọjọọ o mere,+ ọ ghaghịkwa ịnwụ.”+
53 Ya mere, Eze Sọlọmọn ziri ozi, ha wee kpọdata ya n’ebe ịchụàjà ahụ. O wee bata kpọọrọ Eze Sọlọmọn isiala; e mesịa, Sọlọmọn sịrị ya: “Laa n’ụlọ gị.”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D11%26Chapter%3D1%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl